दशैंमा घर जाँदै हुनुहुन्छ, कति लाग्छ घरसम्मको भाडा ? देशभरको सूचीसहित — Imandarmedia.com
दशैंमा घर जाँदै हुनुहुन्छ, कति लाग्छ घरसम्मको भाडा ? देशभरको सूचीसहित
काठमाडौ। सरकारले असोज ११ गतेदेखि दसैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले ११ गतेदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विभागले बिहीबार यातायात व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र ट्राफिक प्रहरीसँगको छलफलपछि असोज ११ गतेदेखि लामो दूरी चल्ने सवारीसाधनको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने निर्णय गरेको हो।
यो निर्णयसँगै तोकिएको मितिदेखि धमाधम टिकट बुकिङ गर्न सकिन्छ। सरकारले गत असारदेखि सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजन गरेको छ।
यात्रुवाहक सवारीको भाडा २८ प्रतिशतले बढाइएको भए पनि अन्तर प्रदेशको भाडा समायोजन लागू हुन सकेको छैन। व्यवसायीहरुले भाडा समायोजन तत्काल कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागले २०६५ मा बनाएको वैज्ञानिक भाडा समायोजनको मापदण्ड अनुसार भाडा समायोजन गर्दै आएको छ। तपाईको घर पुग्न कति भाडा लाग्छ तलको तालिकामा हेर्नुहोस् ।
सत्ता गठबन्धनमा फेरि खटपट सुरु भएको छ । खासगरी मन्त्रालय बाँडफाँडमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राम्रो मन्त्रालय आफ्नो पार्टीलाई मात्रै राखेको भन्दै गठबन्धनमा आवद्ध दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव असन्तुष्ट बनेका छन् ।
पछिल्लो समय गठबन्धनको बैठकमा समेत अध्यक्ष यादवले यही ताल भए आफूहरु सरकारमा सहभागी नहुने चेतावनी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले यसअघि नै सरकारलाई पूर्णता दिनेगरि गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरुलाई मन्त्रीको नाम मागेका थिए ।
तर, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले नाम दिन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको कुरा आईरहेको थियो ।पछिल्लो समय डा. नारायण खड्का परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सत्ता गठबन्धनमा फेरि खटपट सुरु भएको छ । जसपा अध्यक्ष यादव आँफै सरकारमा सहभागी हुन चाहन्थे ।
यादवले यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालय मागेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त मन्त्रालयको जिम्मा आफ्नै पार्टीका नेता खड्कालाई दिएपछि यादव रुष्ट बनेका छन् । अहिलेसम्म कांग्रेसबाट चार र माओवादी केन्द्रबाट दुई जना मात्रै मन्त्री सरकारमा सहभागी छन्।